Iran: Mpiandry saha miisa efatra nisaonan’ny mpitoraka bilaogy miaro ny natiora · Global Voices teny Malagasy
Iran: Mpiandry saha miisa efatra nisaonan'ny mpitoraka bilaogy miaro ny natiora
Voadika ny 19 Marsa 2011 4:45 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, English
Nanaitra ny mpitoraka bilaogy miaro ny natiora ny fahafatesan'ireo olona efatra mpiandry saha ao Iran vao haingana kely izay. Novonoina ary nesorina mihitsy ny ain'ireo tovolahy miisa efatra ireo tao amin'ny tanàna iray tao Sanandaj tao amin'ny faritr'i Iran any Kuridstan. Nasain'ny mpamorona ilay vohikala Green Wave (sary etsy ambony) miompana amin'ny fiarovana ny natiora ireo mpitoraka bilaogy mba hanoratra mikasika an'io lohahevitra io: “ny natioran'i Iran, toerana iray izay amoizan'ireo mpiandry saha ny ainy. Nahoana?” tamin'ny 6-13 Martsa.
Azontsika vakiana [fa] ao amin'ny bilaogin'i Lor izany:
Inona ary no antony nahafatesan'ireo mpiandry saha miisa enina anatin'ny heritaona monja? Mazava tsara ny andraikitr'ireo vondrona mafana fo amin'ny fiarovana ny natiora. Tokony hanohana ireo mpiandry saha ireo isika mba tsy hitrangan'izao toe-javatra izao intsony any aoriana.
Hoy [fa] ny bilaogy Rifr:
Fa dia inona loatra re no niseho no dia navela ny ho faty ireo mpikarakara saha efatra ireo e? Mbola tsy nivonona hanambana basy akory izy ireo ary manaporofo izany fa tampoka tamin'izy ireo ny fanafihana toy izao. Tokony ho tsaroantsika izany fa tao anatin'ny 30 taona, dia mpiandry saha miisa 110 no namoy ny ainy ary 450 hafa koa no nahazo takaitra.
Nanoratra [fa] i Avaye Mohitezit Iran:
Anisan'ny iray tamin'ireo niharan-doza i Kamal Hussein Panahi, mpianatra iray mandalina ny resaka harena voajanahary. Nizara ny fahalalany tamin'ny mpianatra hafa izy. Rariny ve raha olona tia sy mpitandro ny natiora sy manodidina no hotifirina?
Nanoratra [fa] i Tabiatbakhtiari:
Dia tena latsaka ambany ve ny toe-tsaina nananantsika mikasika ny fiaraha-monina no dia nisy olona namoy ny ainy noho ny fitandroany ny natiora.
Nanoratra i Khbarnationalpark fa tsy nomena ny fototry ny zon'olombelona ireo mpikarakara saha teratany Iraniana.
1 andro izayBahrain